By vijayafm on	 May 8, 2019 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैंडाकोट । गैंडाकोट नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न शिर्षकमा रु. ३७ करोड १४ लाख ३९ हजार ५ सय २२ रुपैँया खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २४ करोड ९३ लाख ९० हजार ४ सय ३१ र पुंजीगततर्फ १२ करोड २० लाख ४९ हजार ९० रुपैँया खर्च गरेको हो ।
गैंडाकोट नगरपालिकाको कुल बार्षिक बजेटको ५१.६५ प्रतिशत बजेट चैत्र मसान्तसम्म खर्च भएको छ । कुल बजेट ७१ करोड ९१ लाख ३६ हजार ६ सय ५ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त सम्म मात्रै विभिन्न शिर्षकमा रु. ३७ करोड १४ लाख ३९ हजार ५ सय २२ रुपैँया खर्च गरेको हो ।
पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमा मात्रै ११ करोड ३१ लाख भन्दा वढि खर्च भएको छ । चालुतर्फ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ९ करोड २८ लाख ९२ हजार ८ सय २२ खर्च भएको छ भने पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा २ करोड २ लाख ९४ हजार ६ सय खर्च भएको छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकामा विभिन्न भत्तामा मात्रै ३० लाख भन्दा वढि रकम खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पदाधिकारीको बैठक भत्तामा मात्रै १८ लाख २३ हजार रुपैंया खर्च भएको छ । स्थानिय र कर्मचारी भत्तामा गरि ५ लाख भन्दा वढि रकम रहेपनि यो शिर्षकमा खर्च भएको छैन । महंगी भत्तामा ११ लाख ६ हजार, फिल्ड भत्तामा ५७ हजार ६ सय, अन्य भत्ता शिर्षकमा १ लाख ६ सय ३९ रुपैँया खर्च भएको छ । यो सँगै पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ लाख ७७ हजार ७ सय ५० खर्च गरिएको छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको चैत्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरणमा ईन्धनमा मात्रै करिब १६ लाख खर्च भएको जनाईएको छ । विवरणमा पदाधिकारीको ईन्धनमा मात्रै ६ लाख १३ हजार ३ सय १९ रुपैँया खर्च भएको जनाईएको छ भने कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ लाख ७८ हजार ५ सय ७९ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ६ लाख ७७ हजार ३२ रुपैँया सवारी साधन मर्मत खर्च गरेको देखिन्छ ।
चैत्र मसान्तसम्म नगरपालिकामा १ लाख ८३ हजार १ सय ३३ रुपैँयाको पानी तथा बिजुली खपत भएको छ भने सञ्चारमा मात्रै १ लाख ३३ हजार ९ सय १५ रुपैँया खर्च गरेको पाईएको छ ।
नगरपालिकामा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारमा वार्षिक बजेटको कुल ४ लाख ४२ हजार ४ सय १५ रुपैँया सत प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रम खर्चमा ४ करोड ४ लाख २६ हजार ३ सय ८७ खर्च भएको छ । विविध कार्यक्रम खर्च ६६ लाख १३ हजार वढि खर्च गरिएको छ ।
भ्रमण खर्चमा १० लाख ६४ हजार ८ सय २०, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा ४१ हजार ७ सय, अन्य भ्रमण शिर्षकमा १ लाख २३ हजार ५ सय ७५ खर्च भएको उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षामा ५ करोड ६२ लाख ३ हजार ८ सय, अन्य सामाजिक सहायतामा १० लाख ८२ हजार ७ सय २९ खर्च भएको छ ।
(हेर्नुहोस चैत्र मसान्त सम्मको पूर्ण आय व्यय विवरण)
गैंडाकोट नगरपालिकाको चैत्र मसान्त सम्मको पूर्ण आय व्यय विवरण